FBC - Biskileeta oofuun kaansarii fi dhibee onnee hir’isa- qorannaa
Biskileeta oofuun kaansarii fi dhibee onnee hir’isa- qorannaa
Finfinnee, Ebila 13,2009(FBC) –Biskileeta oofuun kaansarii fi dhibee onnee akka hir’isu qorattoonni Ingiliizii himan.
Ammam jiraachuu barbaaddu?
Yeroo dheeraa jiraachuu barbaaddu taanan waan kaansariif isin saaxiluu fi dhibee onnee hir’isaa jedhu saayintiistonni qorannicha gaggeessan.
Qorannicha gaggeessanii bu’aa isaarra ga’uuf waggoota 5 fudhateera jedhame.
Waggoota kanneen keessatti namoota 250,000 fedhii qabanirratti kan gaggeeffame.
Namoonni kanneen konkolaataa taa’anii eeguu, yeroo dheeraa konkolaataan imaluu, taa’aa ooluu fi socho’uu dhabuun, rakkoo fayyaaf saaxilamaa turan.
Haata’uutii miilan socho’uun bu’aa akka qabu arganiiru.
Biskileeta oofuunis sochii qaamaa waan qabuuf qaama jabeessuu, sissi’eessuu fi dadammaqsuun ala fayyaa keenya eeguu fi dhibeef akka hin saaxilamne gargaaruurratti bu’aa qaba jedhan qorattoonni biyyattii.
Gareen qorattootaa Gloosgoow akka jedhanitti, biskileetan deemuu barraan, akka nama waa hojjechuu deemutti hin dhiphattan. Sanarra akkuma imala wayii deemtaniitti amaleeffachuun itti fayyadamuu dandeessu jedhan.
Qorannaan waggaa 5 fixe kun namoota bakkaa bakkatti sochii taasisanii fi oolmaan isaanii sochii baay’ee hin qabne wal cinaa qabee ilaalera.
Namoota qorannaan irratti gaggeeffame keessaa 2,430 du’aniiru.
3,748 dhibee kaansariirraa dandamachuuf yaalarra turan. 1,110 ammoo dhibee onnee qabu ture.
Qorannichaan garuu namoonni biskileeta oofuu amaleeffatan du’a 41%n, saaxilama kaansarii 45% fi dhibee onneemmoo 46%n hir’isaniiru.
Torbeetti maayila 30 ofuun dansaa akka ta’e kan eere qorannichi, sanaa ol oofuu dandeenyan ammoo carraan fayyummaa qabaachuu olaanaa ta’a jedhameera.
Miilan deemuun dhibee onnee ittisuuf, torbeetti maayila 6 ol deemuu gaafata.
Dooktar Jaason Giil Yuunvarsiitii Glaasgoowirraa, namni sochii taasisu fayyummaa olaanaa qabaata; saaykilii ofoon ammoo sana caala jedhan.
Namni ganama ka’ee hojii gaafa deemu yookin gabaas gaafa ba’u saaykilii ooofuu silaa osoo amaleeffatee carraa dhibeef saaxilamuu isaa hir’isa jedhan.
Oduuwwan Biroo « Qorattoonni jilba nam-tolche jilba miidhame bakka bu’u teeknoolojii 3D hojjachuusaanii beeksisan	Sababa hanqina sirna nyaatatiin biyyattiin waggaatti galii waliigalaarraa 8% hanga 11 dhabdi »